တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Hong Liang နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည်သည့်တော်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် သည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုဆက်ဆံရေးကို များစွာအထောက်အကူ ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နက်ရှိုင်းသော ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ချစ်ကြည်ရေးကို ဆက်လက်တိုးတက် ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ မိမိ၏ ယခုခရီးစဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ် ပါတီ၏ ၁၉ ကြိမ်မြောက် ပါတီညီလာခံအပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေါင်းဆောင်အဆင့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြန်လည်ပြောကြားရာတွင် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်း နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဘက်စုံ မဟာဗျူဟာမိတ်ဘက်နိုင်ငံအဖြစ် အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးပါသော နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် အစိုးရချင်း၊ ပြည်သူချင်း၊ တပ်မတော်ချင်း ဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍများစွာ၌ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုးရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ရလဒ်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် ပြောင်းလဲမှု များတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါကြောင်း၊ အဆွေတော်၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် မူးယစ် ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး၊ အပြန်အလှန်သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အောက်ခြေအဆင့် အထိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား၊ ရဲတပ်ဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော ဒေသဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအနေအမှန်အတိုင်း တရုတ်နိုင်ငံက ရပ်တည်ထောက်ခံ ပေးမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျ ပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ၊ ပွညျသူ့လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာန ဝနျကွီး H.E. Mr. Zhao Kezhi အား ယနေ့ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ၊ ပွညျသူ့ လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာနဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Hong Liang နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့ရာတှငျ ဧညျသညျ့တျောတရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ၊ ပွညျသူ့ လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာနဝနျကွီးက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ သညျ တရုတျ-မွနျမာ နှဈနိုငျငံ ခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုဆကျဆံရေးကို မြားစှာအထောကျအကူ ပွုနိုငျခဲ့ပွီး နှဈနိုငျငံ နကျရှိုငျးသော ဆှမြေိုးပေါကျဖျော ခဈြကွညျရေးကို ဆကျလကျတိုးတကျ ဖျောဆောငျနိုငျမညျဟု ယုံကွညျပါကွောငျး၊ မိမိ၏ ယခုခရီးစဉျသညျ တရုတျနိုငျငံကှနျမွူနဈ ပါတီ၏ ၁၉ ကွိမျမွောကျ ပါတီညီလာခံအပွီး တရုတျနိုငျငံ၏ ခေါငျးဆောငျအဆငျ့ တာဝနျရှိသူတဈဦး မွနျမာနိုငျငံသို့ ပထမဆုံးလာရောကျခွငျးဖွဈပွီး မိမိအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပထမဆုံး လာရောကျခွငျးဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ပွနျလညျပွောကွားရာတှငျ မွနျမာ-တရုတျ နှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးကောငျး၊ မိတျဆှဟေောငျး နိုငျငံမြားဖွဈပွီး ယခုအခါ ဘကျစုံ မဟာဗြူဟာမိတျဘကျနိုငျငံအဖွဈ အပွနျအလှနျအသိအမှတျပွုထားသောကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ အရေးပါသော နိုငျငံဖွဈပါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးတှငျ အစိုးရခငျြး၊ ပွညျသူခငျြး၊ တပျမတျောခငျြး ဆကျဆံရေး ကဏ်ဍမြားစှာ၌ ကယျြကယျြ ပွနျ့ပွနျ့၊ ရငျးရငျးနှီးနှီး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားကွောငျ့ နှဈနိုငျငံလုံးအတှကျ အကြိုးရှိပါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု၏ ရလဒျမြားကို မွနျမာနိုငျငံ၏ ဖွဈပျေါတိုးတကျ ပွောငျးလဲမှု မြားတှငျ တှမွေ့ငျနိုငျပါကွောငျး၊ အဆှတေျော၏ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပထမဆုံး ခရီးစဉျအတှကျ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ကွိုဆိုပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံ နယျစပျဒသေလုံခွုံရေးနှငျ့တညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ တရား ဥပဒစေိုးမိုးရေးနှငျ့ မူးယဈ ဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေး၊ အပွနျအလှနျသတငျးအခကျြအလကျ ဖလှယျရေးကဏ်ဍမြားတှငျ အောကျခွအေဆငျ့ အထိ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား အရှိနျအဟုနျ မွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျ အကွား၊ ရဲတပျဖှဲ့မြားအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျမြား ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတော ဒသေဖွဈစဉျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အခွအေနအေမှနျအတိုငျး တရုတျနိုငျငံက ရပျတညျထောကျခံ ပေးမှုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ နိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောကောငျစီဝငျ၊ ပွညျသူ့လုံခွုံရေးဝနျကွီးဌာနဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ Admin 0
ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0